FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BULLMASTIFF - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bullmastiff
'Ireto ny zanak'alika Bullmastiff, Izzy 11 volana ary Sonny amin'ny 4 volana. Toa henjana izy ireo nefa ny zavatra mamy indrindra eto an-tany! Tian'izy ireo ny mijery an'i Cesar Millan ary misakafo amin'ny zavatra rehetra! '
afghan hound mixer retriever volamena
Lisitry ny alika Bullmastiff mifangaro
Ny Bullmastiff dia goavambe, tena matanjaka, saingy tsy alika manahirana. Miketrona ny karan-doha lehibe sy malalaka ary malalaka sy lalina ary mazàna maizina ny lokony. Milamina ny handrina ary antonony ny fijanonana. Malalaka ny orona mainty ary manana vavorona lehibe. Mihaona ny nify amin'ny haavon'ny haavo na amin'ny ambany. Ny maso salantsalany dia hazelà mainty. Ny sofina miendrika V dia apetraka avo sy malalaka, entina manakaiky ny takolaka, manome endrika toradroa amin'ny karandohany. Ny rambony mahery dia apetraka avo, matevina kokoa amin'ny faka ary mihidy ary na mahitsy na miolaka, ary mahatratra ny volombava. Fohy sy mahitsy ary mahitsy ny lamosina eo anelanelan'ireo malazo sy valahany. Ny palitao fohy, matevina ary somary marokoroko dia avy amin'ny brindle, volondavenona na mena, matetika misy marika mainty eo amin'ny loha.
Ny Bullmastiff dia alika mpiambina malina sy mailo, manana toetra tsara. Mahay mandanjalanja sy be fitiavana, fa tsy matahotra raha ihantsiana. Na dia mety tsy hanafika aza dia hahatratra an mpiditra an-tsokosoko , mandondòna ary tazomy izy. Mandritra izany fotoana izany dia mahazaka ankizy. Manan-tsaina, mahonon-tena, milamina ary tsy mivadika, irin'ireto alika ireto fitarihana olombelona . Mahery be ny Bullmastiff ary mila a tompony mafy orina izay matoky tena sy mifanaraka amin'ny ny lalàna apetraka amin'ny alika. Tokony ho tsara izy ireo fanofanana voaofana , ary tokony ampianarina tsy hisintona ny tadiny. Rehefa miditra sy mivoaka amin'ny vavahady na amin'ny vavahady ny alika dia tokony hamela ny olombelona hiditra sy hivoaka aloha noho ny fanajany entana, satria ao an-tsain'ny alika dia ny mpitarika no mandeha voalohany. Ny alika dia tsy maintsy ombelahin-tongony na eo ambadiky ny olombelona . Zava-dehibe indrindra izany, satria tsy ny alika ihany no manana instincts migration ary mila mandeha isan'andro, fa ny voajanahary kosa dia milaza amin'ny alika ny mpitarika fonosana mandeha aloha. Aza hadino ny mifanerasera be amin'ny olona sy ny alika hafa amin'ny mbola kely. Afaka mandeha tsara izy ireo biby hafa , arakaraka ny ifandraisan'ny tompony amin'ny alika. Ny Bullmastiff dia karazany lehibe noho ny Mastiff . Mirona izy drool , slobber ary snore. Ny alika kely dia mety toa tsy voarindra. Ireo alika ireo dia tena mora tohina amin'ny feon'ny feonao ary mila olona miteny amin'ny rivotra maha-sahisahy azy fa tsy masiaka. Tsy alika sarotra io fa mila mpitantana afaka manamafy ny fahefany. Ny Bullmastiff dia tsy tokony hatsipy any anaty tranon-jaza mihitsy. Ny tompon-javatra malemy paika na mandalo fotsiny dia hahita fa sarotra ny mifehy ity alika ity. Hiseho an-tsitrapo izy, mety ho mahery setra amin'ny alika hafa ary natokana ho an'ny olon-tsy fantatra raha tsy manokana fotoana ny tompony hifanerasera , ary mahalala ny fomba hampitana tsara ny zavatra antenaina amin'ny fomba misy heviny.
Haavony: Lehilahy 25 - 27 santimetatra (63 - 69 cm) Vehivavy 24 - 26 santimetatra (61 - 66 cm)
Milanja: Lehilahy 110 - 133 kilao (50 - 60 kg) Vehivavy 100 - 120 pounds (45 - 54 kg)
Mora amin'ny cancer , dysplasia hip, fivontosana, olan'ny hodi-maso, PRA ary mangotraka amin'ny molotra. ihany koa mora mitsonika . Tsara raha manome sakafo kely na roa na telo isan'andro azy ireo fa tsy sakafo lehibe iray. Mora mahazo lanja, aza mavesatra ny sakafo. Mora amin'ny fivontosan'ny sela .
Bullmastiff dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampy ny fampiasan'izy ireo. Tsy miasa intsony izy ireo ao an-trano ary hisy tokontany kely. Tsy zakan'izy ireo ny mari-pana tafahoatra.
Bullmastiff dia mila raisina a mandeha isan'andro hanatanterahana ny fahatsapan'izy ireo ny kanelina primal mba hifindra monina. Ireo olona tsy mahazo izany filàna izany dia azo inoana fa hanana olan'ny fitondran-tena . Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ampianaro izy ireo hiditra sy hivoaka ny varavarana rehetra sy ny vavahady aorian'ny zanak'olombelona.
Latsaky ny 10 taona.
Alika kely 4 - 13, 8 eo ho eo
Ny palitao fohy volo sy somary henjana dia mora karakaraina. Afangaroy sy borosy amin'ny borosy mafy volo, ary shampoo raha tsy ilaina. Tsy dia misy raraka amin'ity karazana ity. Zahao tsy tapaka ny tongotra satria mavesatra be izy ireo, ary manamboara fantsika.
Ny Bullmastiff dia azo tamin'ny alàlan'ny fiampitana Mastiff 60% miaraka amin'ny Bulldog 40% ao amin'ny firenena Angletera. Ny karazana Mastiff Bulldog dia hita ao amin'ny firaketana hatramin'ny 1795. Tamin'ny 1924 dia nanomboka notsaraina i Bullmastiff. Taranaka telo amin'ny fiompiana Bullmastiff no takiana amin'ny fisoratana anarana ho Bullebrast. Ny Bullmastiff dia nampiasaina ho alika mpikarakara lalao hamotopotorana, hikirakira ary hitazomana mpihaza. Masiaka sy mandrahona ireo alika ireo, saingy nampiofanina tsy hanaikitra ireo niditra an-tsehatra. Rehefa nihena ny filàn'ny alikan'ny mpikarakara gamer, ny alika maizim-borona maivana tsara ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alina dia nalaza tamin'ny lokon'ny volondavenona maivana kokoa. Izy io dia nanjary sarobidy ho mpiambina mpihaza, ho fanampiana amin'ny asan'ny tafika sy ny polisy, ary ampiasain'ny Fikambanana diamondra any Afrika Atsimo. Bullmastiff androany dia mpiara-miasa sy mpiambina azo antoka. Ankafiziny ny miaina miaraka amin'ny fianakaviana, izay ampiononin'izy ireo tsara.
Odin the Bullmastiff puppy amin'ny 12 herinandro milanja 35 pounds.- 'Tian'i Odin ny sakafo maraina, atoandro ary sakafo hariva, ary indrindra ny dia tiany hijerena ireo zaza hafa ao amin'ny kilasy fankatoavana.'
Odin the Bullmastiff puppy amin'ny 12 herinandro milanja 35 pounds.
Higgins the Bullmastiff amin'ny faha-7 volana— 'Higgins dia 7 volana ary 85 lbs amin'ity sary ity. Alika malemy fanahy izy ary tena hendry nefa maditra kely. Mahery sy mailaka, fa saro-kenatra amin'ny olon-tsy fantatra. Efa namaky sy nahita fitaovam-piofanana maro aho, anisan'izany i Cesar Millan. Rehefa miofana dia toy ny hentitra satria mila sy manome valiny tsara . '
Shirley, Bullmastiff an'ny Circle J Bullmastiff, dia 1½ taona sy 105 pounds.
Brutus the Bullmastiff sahabo ho roa taona— 'Brutus dia Bullmastiff lahy. Tena be herim-po izy, be herim-po, malefaka, be fitiavana ary tsy mivadika. '
Rambo the Bullmastiff amin'ny 1 taona
Charlie, zanak'omby Bullmastiff, 16 volana
'Lacee dia Bullmastiff iraika ambin'ny folo herinandro. Manana toetra fanompoana be fitiavana izy. Na dia ny fatoriany aza dia matetika matory dia manana spunk be ao anaty fipoahana fohy izy. '
zanak'alika pomeranian pekingese amidy
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Bullmastiff
Sary Bullmastiff 1
Sary Bullmastiff 2
Sary Bullmastiff 3
Sary Bullmastiff 4
Sary Bullmastiff 5
Jack Russell terrier Chihuahua afangaro alika
Alika kely mpiady mpiady sy mpiady
beagle sy fifangaroana pincher kely
Alika kely pitbull 5 herinandro
ridgeback rhodesianina sy laboratoara
fox terrier rat terrier mifangaro